တရုတ်နိုင်ငံ၏ နက်ရှိုင်းသော အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေမှု ဓာတ်ခွဲခန်း စတင်လည်ပတ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ ပေကျင်း လေယာဉ်တည်ဆောက်မှုနည်းပညာ ထိန်းချုပ်စင်တာတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ Tianwen-1 အာကာသယာဉ် အောင်မြင်စွာဆင်းသက်ပြီးနောက် နည်းပညာရှင်များက အောင်ပွဲခံနေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေ ၁၅ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နက်ရှိုင်းသောအာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းကို စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ် အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
CNSA ၊ အန်ဟွေးပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့မှ ပူးတွဲတည်ထောင်ထားသော အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲခန်းသည် အန်ဟွေးပြည်နယ် မြို့တော် ဟဲဖေတွင် တည်ရှိသည်။
ယင်းဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အမျိုးမျိုးသော ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးစီး၍ များပြားလှသောလုပ်ငန်းနှင့် ဘက်စုံတည်ဆောက်မှု အဆင့်သစ်သို့ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း CNSA အရ သိရသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းတည်ဆောက်ခြင်းသည် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု မောင်းနှင်အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၌ တရုတ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ကြံ့ခိုင်မှု အားကောင်းခြင်း၏ အရေးပါသော ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း CNSA အကြီးအကဲ Zhang Kejian က ဓာတ်ခွဲခန်း ကောင်စီ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းကို ပမာဏကျယ်ပြန့်စွာ နိုင်ငံအဆင့် ဘက်စုံသုတေသနအခြေစိုက်စခန်းအပြင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လွှမ်းခြုံမှုနှင့်အတူ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအဖြစ် တည်ဆောက်ရန်လည်း ၎င်းက အလေးထားပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-14 15:46:00
BEIJING, June 14 (Xinhua) — China’s deep space exploration laboratory has started operation, the China National Space Administration (CNSA) said Tuesday.
The establishment of the laboratory is an important step toward implementing the innovation-driven development strategy and strengthening the country’s strategic strength in science and technology, said Zhang Kejian, head of the CNSA, duringavideo conference of the laboratory council.
He stressed building the laboratory intoalarge-scale, national-level comprehensive research base, as well as an innovation hub with global influence. ■
Photo : Technical personnel celebrate after China’s Tianwen-1 probe successfully landed on Mars at the Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, May 15, 2021. (Xinhua/Jin Liwang)